Bishnu Rimal's Website » Blog Archive » नेपाली मजदुर र तिनका समस्या
नेपाली मजदुर र तिनका समस्या
सरकार” भन्दै जनताले एकै स्वरमा जवाफ फर्काएछन् । “तिमीहरूले दुधभात पनि खान पाएका छैनौं ? “राजाको यो प्रतिप्रश्नबाट जनता हतप्रभ भएछन् । त्यो बेलाको यो किस्सा नेपाली मजदुरहरूको समस्याको सन्दर्भमा अहिले पनि प्रासंगिक छ । “नियुक्तिपत्र र आठ घण्टे कार्यदिवस” को माग कतिपयलाई राजा त्रिभुवनस“ग खान नपाएको गुनासो गर्ने जनताको माग जस्तै लाग्न सक्छ । तर, यो नै मजदुरहरूका ज्वलन्त माग बनिरहेको छ ।
समग्रमा, नेपाली मजदुरहरूको समस्यालाई यसरी नै उल्लेख गर्न सकिन्छ । जबसम्म श्रमजीवि वर्गीय आन्दोलनलाई समष्टिमा हेरिदैन, व्यापक अर्थमा लिइंदैन, सहि अर्थमा मजदुरहरूको समस्याको पहिचान हुनै सक्दैन । एकातिर तलव वृद्धि, सुविधाको माग, नियुक्ति पत्र जस्ता मागहरू वर्तमानमा नेपाली मजदुरहरूको समस्या नै हुन् अर्कातर्फ श्रम नीति, ज्याला नीति, अर्थनीति लगायतका सबै विषयहरू पनि नेपाली मजदुरहरूकै समस्या हुन् भन्ने हामीले महसुस गर्नुपर्छ ।
राणाशाहीको शासन कालमा एकचोटी भोका जनताले राजा त्रिभुवनलाई भेटेछन् । “तिमीहरूको के समस्या छ ?” राजा भित्रुवनको यो प्रश्नको जवाफमा “खान पाएनौं सरकार” भन्दै जनताले एकै स्वरमा जवाफ फर्काएछन् । “तिमीहरूले दुधभात पनि खान पाएका छैनौं ? “राजाको यो प्रतिप्रश्नबाट जनता हतप्रभ भएछन् । त्यो बेलाको यो किस्सा नेपाली मजदुरहरूको समस्याको सन्दर्भमा अहिले पनि प्रासंगिक छ । “नियुक्तिपत्र र आठ घण्टे कार्यदिवस” को माग कतिपयलाई राजा त्रिभुवनस“ग खान नपाएको गुनासो गर्ने जनताको माग जस्तै लाग्न सक्छ । तर, यो नै मजदुरहरूका ज्वलन्त माग बनिरहेको छ ।
पूर्ण पाठ को pdf फाइल डाउनलोड गर्नुहोस Nepali Majdoor ko Samasya